Wafdi ka socda Dowladda oo gaaray degmo tirsan Gobolka Gedo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wafdi ka socda Dowladda oo gaaray degmo tirsan Gobolka Gedo
Wafdi ka socda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gaaray degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, waxaana wafdiga si weyn usoo dhaweeyay maamul ka degmada, saraakiisha ciidan ka ee halkaas ku sugan iyo qaybaha kale ee bulshada.
Ujeedka ay wafdigaan Baardheere u gaareen ayaa ah sidii ay u daah furi lahaayeen dhismaha Buundada Baardheere oo ah mid u baahan dayactir ballaaran, waxaana Buundada degmada ka muuqda bur-bur aad u weyn oo gaaray.
Wafdiga ayaa isugu jiray Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka, waxaana ka mid ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad Aqalka sare ee Baarlamanka Dowladda Federaalka Mawliid Xuseen Guhaad, iyagoo sheegay in ay billaabayaan dhismaha buundada oo baahi weyn ay u qaban shacabka ku nool degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Qalabkii dhismaha iyo Injineeradii dhisi lahaa ayaa la geeyay halkaas sida ay sheegeen wafdiga degmada gaaray, waxaana la filayaa ay bilaabato dhisidda Buundada.
Guddoomiyaha degmada iyo shacabka ku nool Baardheere ayaa soo dhaweeyay mashruucaan lagu dhisaaayo Buundada degmada, wadayaasha gaadiidka ayaa si gaar ah usoo dhawweyay arrintaan, waxaana ay tilmaameen in ay fududaan doonto isku socodka guud ee degmada iyo degmooyinka kale.
Dhismaha Buundadaan aaya waxaa horay ugu yimid dib u dhaca, waxaana horay la isugu dayay in la dhiso, balse laguma guulaysan, hadda Xildhibaanada ku matala degmada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay u istaageen dhisidda Buundada.
Maqaal horeMadaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Mas’uuliyiin kale oo kulmay
Maqaal XigaXilliga uu dib u bilaabanayo Jaadka Kenya laga keeni jiray oo la shaaciyay